Thumbor dia fitaovana iray misokatra miaraka amin'i AI hanodinana sary | Famoronana an-tserasera
Thumbor dia fitaovana iray loharano misokatra Misongadina amin'izany ny famelana ny olon-drehetra hanova ny habeny amin'ny sary, saingy amin'ny fomba tena lehibe sy manaitra. Mampiasà faharanitan-tsaina artifisialy mba hahafahanao manitatra ireo sary izay mazàna mahazo pixelated raha toa ka tafita ny rano isika.
Serivisy fitarafana an-tsary fangatahana izay karakaraina mamolavola sary, ovao ny habeny ary apetaho sivana. Mba hamokarana io majika io amin'ny faharanitan-tsaina artifisialy, Thumbor dia mampihatra algorithms samihafa izay manana fahaizana mamantatra tarehy mba hahafahana manapaka tsara azy.
Izany hoe mikarakara hetezo ny faritra iray manontolo manodidina ny tarehy hahazoana antoka fa voatahiry ireo ampahan'ny sary izay manan-danja indrindra amintsika. Toy izany no fiasan'ny faharanitan-tsaina na AI amin'ny Thumbor.
Ny mampiavaka azy koa dia ny fahaizany mahay, ary izany dia mamela anao hampiditra sary avy http, redis ary mongo. Mandritra izany fotoana izany no fomba fampiasa indrindra amin'ny famoahana sary mba hahafahantsika mameno io habe io izay tianay omena sary iray manokana ary liana izahay.
Tsara homarihina fa tsy mijanona ao anaty habe fotsiny io fa afaka andian-sivana voafatotra rojo vy ao ambadiky ny iray hafa, tahaka ny ahafahantsika miasa miaraka amin'ny sivanay manokana. Ka ity dia fitaovana mampitolagaga tokoa ary raha tsy fantatrao dia izao no fotoana ampidirana azy ao anaty workflow anao. Azo antoka fa ho fantatrao ny fomba hanomezana azy ny ilaina ilaina.
Indrindra satria fitaovana open source malalaka manome izany fanohanana ireo endrika sary WebP. Ny an'ny Google izay miavaka amin'ny famatrarana sary tsy misy fatim-pihaviana. Ho anao izay manangana tranokala iray dia azo antoka fa ho fantatrao ny fomba ahazoanao tombony betsaka amin'izany.
Ny rohy mankany Thumbor is this. Fitaovana iray manontolo ho an'ny sary, toy ity kinova vaovao iray amin'ny programa Adobe ity, izay anananay maimaimpoana. Efa mandray ianao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Ovao ny haben'ny sary amin'ny alàlan'ny fitsikilovana artifisialy an'i Thumbor
Ireo biby goavam-be mihoatra ny 300 ireo dia miorina amin'ny sarin'ankizy an-jatony maro